Cellophane kuputira muchina Vatengesi uye fekitori - China Cellophane kuputira muchina Vagadziri
Bt-200 Cosmetics otomatiki 3D Cellophane Kuputira Muchina
BT-200 Cosmetics otomatiki 3D Cellophane Kuputira muchina Zvimiro: Mushini wakagadzirwa padanho rekutora nekuzeya zvekunze zvigadzirwa zvemberi, uchishandisa yakaunzwa yedhijitari kuratidza transducer uye elec zvinhu, yakagadzikana uye yakavimbika mukushanda, yakasimba kubira, kutsvedza yakanaka. Inogona kuita otomatiki kurongedza, kufudza, kupeta, kupisa-kuvhara, kuverenga uye otomatiki anonamira misodzi tepi. Kurongedza kumhanya kunogona kugadziriswa zvisina nhanho. Kuchinja mashoma zvikamu kunogona kuputira akasiyana specificati ...
Bt-300 Yakazara otomatiki Cigarette Bhokisi 3D Cellophane Kuputira Muchina
BT-300 Cigarette Bhokisi Otomatiki 3D Cellophane Kuputira Muchina Zvimiro: Mushini wakagadzirwa pahwaro hwekumedza nekuzeya zvekunze zvigadzirwa zvemberi, uchishandisa yakaunzwa yedhijitari kuratidza transducer uye elec zvikamu, zvakagadzikana uye zvakavimbika mukushanda, chakasimba kuba, kutsvedza yakanaka. Inogona kuita otomatiki kurongedza, kufudza, kupeta, kupisa-kuvhara, kuverenga uye otomatiki anonamira misodzi tepi. Kurongedza kumhanya kunogona kugadziriswa zvisina nhanho. Kuchinja zvikamu zvishoma kunogona kuputira zvakasiyana ...
Bt-200 otomatiki Matatu-eDimensional Transparent Firimu Kadhibhodi Kabhokisi Bhokisi Cellophane Kuputira Muchina
Bt-300 Fekitori Mutengo DVD Bhokisi Cellophane Kuteedzera Muchina
Bt-300 otomatiki Cellophane Tea Bhokisi Matatu-Mativi Akajeka Transparent Membrane Kurongedza Machine
Bt-300 Cigarette Kurongedza Muchina Wakanaka Mutengo
Bt-300 otomatiki Cigarette Cellophane Kurongedza Muchina
Otomatiki Sipo Biscuit Carton Bhokisi 3D Kurongedza Mashini BOPP Firimu Perfume Kutamba Kadhi Cellophane Kuputira Machine
BT-200 Cosmetics Perfume Inotamba Kadhi Sipo Automatic 3D Cellophane Kuputira Mashini Zvimiro: Mushini wakagadzirwa padanho rekutora nekuzeya zvekunze zvigadzirwa zvemberi, uchishandisa inounzwa kunze kwedhijitari kuratidza transducer uye elec zvikamu, zvakagadzikana uye zvakavimbika mukushanda, chakasimba kuba, kutsetseka akanaka. Inogona kuita otomatiki kurongedza, kufudza, kupeta, kupisa-kuvhara, kuverenga uye otomatiki anonamira misodzi tepi. Kurongedza kumhanya kunogona kugadziriswa zvisina nhanho. Kuchinja zvikamu zvishoma kunogona ...
Bt-300 Otomatiki Yekushongedza Bhokisi BOPP Firimu Cellophane Kuputira Muchina
Bt-200 otomatiki Matatu -Dimensional Cellophane Pamusoro Pokuputira Muchina / Midzanga Nyaya Transparent Firimu Kuputira Machine
Bt-400 3D Matatu Dimension Perfume Mafuta ekuzora Cream Lotion Bhokisi Kurongedza Muchina neCellophane BOPP PVC Pepa
BT-400 3D Transparent firimu Cellophane Kuputira Muchina Unoshanda Maitiro: Iyi otomatiki 3D Cellophane Kuputira Muchina zvinoshanda zvinhu ndeye cellophane uye BOPP yekunamatira firimu, uye muchina uyu zvigadzirwa zvakajairika kugadzira 3d kurongedza kwakasiyana maratidziro atoni kana akaomarara mativi emuviri zvinhu. Zvayo zvine chekuita nemishini kubatana sekubata muviri, inotora isina nhanho frequency kudzora mota kumhanya uye otomatiki kudzora emagetsi zvishongedzo. Muchina unobatanidza muchina, electrici ...